Mpangalatra (Google Chrome fanitarana)
Ny maro tsy mpamorona programa sy freelancers dia maniry ny Scraper noho ny tsy fisian'ny tarehimarika manify tsy misy dikany. Ity fitaovan'ny fitaovam-pitaovan'ny GUI ity dia afaka manaparitaka ireo pejy fototra sy avo lenta ary manana teknolojia fianarana matihanina mba hanamora ny asanao. Ity sehatra ity dia natao manokana mba hisintonana ireo angona avy amin'ny Amazon, eBay, ary tranonkala hafa mitovy ary manana tranonkala fitahirizana spam natsangana . Amin'ny alalan'izany dia afaka mamantatra mora foana ny saka amin'ny data ianao ary afaka manala azy ao anatin'ny iray minitra na roa. Izy io dia manana tahirim-bokim-pandrafetana Google API ho an'ny fampindrana tsaratsara kokoa ary mamonjy ny fampahalalana ao amin'ny tahiry manokana. Azonao atao ihany koa ny mamonjy ny angona amin'ny fiara sarotra na izay fitaovana hafa safidy.
Miaraka amin'ny import. io, tsy voatery ho ara-teknika ianao ary afaka manaparitaka tahirin-tsarimihetsika avo lenta. Ity rindrambaiko fanalàna ny tranonkala ity dia nilaza fa nopotehina ny filàn'ny programa sy ny mpahay siansa. Araka ny fantatsika dia mitaky antontan'isa sy matematika ny fahaizana momba ny programa, saingy tsy mila mianatra zavatra ianao raha mampiasa import. io. Ity fitaovana ity dia mety ho an'ny olona sy ny orinasa.
Kimono Labs no sehatra fitadiavana vahaolana amin'ny aterineto misokatra. Afaka manangona tahirin-kevitra avy amin'ny tranokala maromaro ao anatin'ny minitra izany. Izy io dia tonga amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy karama ary mety ho an'ny olona tsy teknika. Amin'ny Kimono Labs, tsy mila mianatra Python na fiteny hafa ianao. Ny mpandranavalona efa voatanisa dia manampy anao hamandrika ny angon-drakitrao na ny tranonkala hafa. Mila maka sy manokatra ity programa ity ianao ary avelao ny data ho an'ny Kimono Labs ho anao ao anatin'ny minitra vitsy. Ny rivotry ny respiratory dia ahafahanao mizara ny fampahalalana amin'ny fitaovana samihafa mora foana sy haingana. Ny Kimono Labs dia ampiasain'ireo orinasa, mpanao gazety, mpivarotra an-tserasera, sampana fifandraisan-davitra, ary freelancers amin'ny ambaratonga lehibe.
API Facebook sy Twitter
Ny olana goavana dia olana goavana ho an'ny olon-tsotra sy tsy teknika isan-karazany. Noho izany dia matetika izy ireo no mampiasa ny API ao amin'ny Twitter sy Facebook mba hikapoka ny angon-dry zareo. Ny API dia manampy antsika hamoaka fampahalalana mahasoa avy amin'ny tranonkala sy bilaogy isan-karazany, ary maminavina ny faminaniana momba ny fomba hanovana sy hamonjena ny angon-drakitra rehefa tapitra tanteraka. Ny ampahany tsara indrindra dia ny API afaka mametraka mora foana ny votoatin'ny tranonkala, amin'ny endrika azo vakina sy azo henoina. Mampiseho tsara ny angon-drakitra ireo angon-drakitra ireo izy, mametraka azy ho sokajy samihafa, na manafatra amin'ny endrika isan-karazany araka ny faniriantsika sy ny zavatra takiantsika.Tsy maintsy mampiasa API media sosialy ianao raha olona tsy teknika izay tsy manana fahaiza-manao programa Source .